May 2020 - Page 48 of 48 - Lupyo News
မိန်းမတွေ ကိုစိတ်နာ လို့ အရုပ်မ နဲ့လက်ထပ် ခဲ့တဲ့သူ ( ရုပ် သံ)
May 1, 2020 by Lupyo News
မိန်းမတွေ ကိုစိတ်နာ လို့ အရုပ်မ နဲ့လက်ထပ် ခဲ့တဲ့သူ ( ရုပ် သံ) ရုပ်သံကိုအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် အခုဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက တချို့အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် အရုပ်မနဲ့အတူနေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို မကြာခဏ တွေ့ဖူး မြင်ဖူးနေမှာပါ။ အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလည်း အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အရုပ်မနဲ့ လက်ထပ်ကာ အတူနေထိုင်ကြတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ထိုအမျိုးသားဟာ မယုံကြည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူနေမယ့်အစား အရုပ်မနဲ့ပဲ လက်ထပ်ကာ အတူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ထိုအရုပ်မကိုပဲ ပြုပြင်ပေးကာ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာကို အတူတူဖြတ်သန်းလျက်ရှိတာကို ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan ) Source-Real stories —————————- Unicode အခုဆိုရငျ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက တခြို့အမြိုးသားတှဟော အမြိုးသမီးတှထေကျ အရုပျမနဲ့အတူနကွေတယျဆိုတဲ့ … Read more
သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူးသွားတဲ့ မိသားစုထွက်ပေါ်လာပြီ နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင်တွင်ဘုရားလာဖူးရင်းထီထိုးရာရန်ကုန်မှဘုရားဖူးမိသားစုသိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူး နေပြည်တော်၊ လက်လုပ်တောင်သာဝက၊ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်၏တပည့်သာဝကရန်ကုန်မြို့နေ ဦးအောင်နေလ+ ဒေါ်ဝေဝေလင်း မှ လက်လုပ်တောင်ဘုရားဖူးခဲ့ပြီးကံစမ်းခဲ့သောထီလက်မှတ်မှာ(၁၅)ကြိမ်မြောက် သိန်း( ၁၅၀၀၀)ကံထူးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင် ရွှေနန်းသွင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏ မေတ္တာတန်ခိုးတော်များ ၊အဓိဌာန်များပြည့်ဝရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများ၊ဘုရားဒကာ၊ဒယိကာမများနှင့်လည်းစည်းကားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Credit ============= unicode သိနျးပေါငျးတဈသောငျးခှဲဆှတျခူးသှားတဲ့ မိသားစုထှကျပျေါလာပွီ နပွေညျတျောလကျလုပျတောငျတှငျဘုရားလာဖူးရငျးထီထိုးရာရနျကုနျမှဘုရားဖူးမိသားစုသိနျးပေါငျးတဈသောငျးခှဲဆှတျခူး နပွေညျတျော၊ လကျလုပျတောငျသာဝက၊ ဗောဓိရိပျငွိမျတောရဆရာတျော၏တပညျ့သာဝကရနျကုနျမွို့နေ ဦးအောငျနလေ+ ဒျေါဝဝေလေငျး မှ လကျလုပျတောငျဘုရားဖူးခဲ့ပွီးကံစမျးခဲ့သောထီလကျမှတျမှာ(၁၅)ကွိမျမွောကျ သိနျး( ၁၅၀၀၀)ကံထူးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။နပွေညျတျောလကျလုပျတောငျ ရှနေနျးသှငျးစတေီတျောမွတျကွီးဟာဗောဓိရိပျငွိမျဆရာတျောဘုရားကွီးတို့၏ မတ်ေတာတနျခိုးတျောမြား ၊အဓိဌာနျမြားပွညျ့ဝရနျ ကငျြ့ကွံအားထုတျမှုမြား၊ဘုရားဒကာ၊ဒယိကာမမြားနှငျ့လညျးစညျးကားတဲ့နရောတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ Credit
သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ရူးရူးမူးမူး ပိုချစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းများ …
သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ရူးရူးမူးမူး ပိုချစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းများ… Relationship တစ်ခုကြာလာရင် ယောကျာ်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးတွေဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ငြီးငွေ့လာတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Relationship ကြာလာရင်တောင် သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ရူးရူးမူးမူး ပိုချစ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုးတွေဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနေရမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ကလေးတစ်ယောက်လို ချွဲပေးပါ … ချစ်သူကောင်မလေးက ချွဲရင် ဘယ်ကောင်လေးမှ မပျော်ဘဲမနေပါဘူး။ နေ့တိုင်းကြီးတော့လည်း ချွဲနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့ ချွဲပေးပါ …။ အဲ့လိုဆို သင်အပေါ်မှာ အချစ်တွေတိုးလာမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ မရိုးနိုင်အောင်ကို ချွဲပေးပါ …။ (၂) အနူးအညံ့ စကားလေးတွေပြောပြီး ချုပ်ပါ … သူက သင့်ကိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးရင် အနူးအညံ့စကားလေးတွေပြောပြီးချုပ်ပါ။ သင့်အပေါ်လုပ်ပေးတာတွေမှန်သမျှကို အသိအမှတ်ပြုပေးပြီး စကားချိုချိုလေးတွေ ပြောပေးပါ … Read more
၁၅ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆုရှင် ထွက်ပေါ်
၁၅ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆုရှင် ထွက်ပေါ် ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ။. ကိုယ်မပေါက်ပေမယ့်လဲ ကိုယ်ပေါက်သလိုပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ် ၁၅ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ဆုကြီး ကို ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ်မှ မနီလာထွန်း က ကံကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်ဗျာ…။ ယင်းဆုကို ည ၅၅၈၀၀၄ အက္ခရာ နံပါတ်ဖြင့် အောင်ဆုထူးပိုင်လေးထောင့်ကန် -ပင်ရင်း ဆိုင်မှ ဆွတ်ခူးရယူသွားပါကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အားလုံးလဲ ထပ်တူထပ်မြ ၀မ်းသာနိုင်ကြပါစေ။ photo credit ———————- unicode ၁၅ ကွိမျမွောကျ ကပျြသိနျး ၁၀၀၀၀ ဆုရှငျ ထှကျပျေါ ဝမျးသာလိုကျတာဗြာ ။. ကိုယျမပေါကျပမေယျ့လဲ ကိုယျပေါကျသလိုပဲ ဝမျးသာမိပါတယျ ၁၅ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ ကပျြသိနျး ၁ဝဝဝဝဆုကွီး ကို … Read more
သတင်းကောင်းပါ..အမေရိကန်ကတောင် ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကုထုံးဆေး Remdesivir
သတင်းကောင်းပါ..အမေရိကန်ကတောင် ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကုထုံးဆေး Remdesivir Remdesivir ဆေး ဟာ Covid-19 အတွက် ကု ထုံး ဖြစ်လာနိုင် တယ်လို့ အမေရိ ကန် ကြေညာ လ တ်တလော စမ်းသပ်နေ တဲ့ Remdesivir ဆေးဝါးဟာ Covid-19 ရောဂါသည်တွေ ကို ကုသရာမှာ အတော်လေး ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်မျိုးတွေ ပြသခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် ထိပ်တန်း ကျန်းမာရေး ပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ ကျန်းမာရေး အရာရှိ ဒေါက်တာ အန်သိုနီ ဖော်စီက Covid-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားစေ တဲ့ Sars-Cov-2 ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို Remdesivir ဆေးဝါးက ပုံမှန်ထက် … Read more
(၁၅)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး
(၁၅)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး သိန်း(၁၅၀၀၀)ဆု စ ၄၄၁၇၉၈ သိန်း(၁၀၀၀၀)ဆ ည ၅၅၈၀၀၄ သိန်း(၅၀၀၀)ဆု ဌ ၆၃၂၀၄၄ သိန်းနှစ်ထောင်ဆု ကဃ ၅၅၃၂၂၄ ဆ ၆၂၉၀၉၅ သိန်းတစ်ထောင်ဆု ည ၂၃၁၁၄၅ ဝ ၉၈၄၀၂၀ သိန်းငါးရာဆု ဟ ၁၁၈၅၅၆ ည ၆၆၃၇၆၇ သိန်းငါးရာဆု ဟ ၁၁၈၅၅၆ ည ၆၆၃၇၆၇ ဆ ၄၇၇၆၈၆ ဠ ၅၅၄၂၇၅ ည ၅၃၂၆၂၀ ကင ၂၆၇၅၄၅ မ ၅၀၄၁၄၆ က ၇၄၁၁၆၃ ပေါက်ဂဏန်းအားလုံးEditလုပ်ပြီး ထက်တင်ပေးသွားမှာပါ အများထီတိုက်နိုင်အောင် ဝေမျှပြီး ကူညီပါ ——————— unicode (၁၅)ကွိမျမွောကျ ထီပေါကျစဉျ အစအဆုံး သိနျး(၁၅၀၀၀)ဆု … Read more